Fukushima 50 (2020) | MM Movie Store
ဂပြနျနိုငျငံတဈနိုငျငံလုံး အားထားရတဲ့ အဏုမွူစှမျးအငျကို ထုတျလုပျပေးနတေဲ့ ဖူကူရှိမား ဒိုငျအိခြိ လို့ချေါတဲ့အဏုမွူစကျရုံကွီးရှိတယျ…..သိတဲ့ အတိုငျး ၂၀၁၁အငျအားကွီးတဲ့ ငလငျြဒဏျနဲ့ ဆူနာမီလှိုငျးဒဏျတှကွေောငျ့စကျရုံတဈခုလုံး လြှပျစဈဓာတျအားပွတျတောကျကာ ဓာတျပေါငျးဖိုတှေ အပူလှနျကဲပွီး ပေါကျကှဲတော့မယျ့အခွအေနနေဲ့ကွုံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီအခွအေနကေို ရှတေ့နျးက ရငျဆျိုငျဖွရှေငျးရသူတှကေတော့ဒိုငျအီခြိ စကျရုံက အလုပျသမား ပညာရှငျတှပေါပဲ။သူတို့တှဘေယျလိုကွိုးစားမလဲ….လူတှဘေယျလောကျမြား သဘေေးကွုံရမလဲ….ဒီကားက ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးပါ….1986 Chernobyl ဖွဈရပျထကျတောငျအမြားကွီးဆိုးတယျလို့ သိရပါတယျ….
အသအေကွတှေမြေားသလို တကယျ့ကိုကွောကျစရာကောငျးတဲ့ကပျဆိုးကွီးပါ… ဇာတျလမျးအစမှအဆုံးထိကို ရငျတထိတျထိတျကွညျ့ရတဲ့ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးမို့ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…
ဂျပန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး အားထားရတဲ့ အဏုမြူစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဖူကူရှိမား ဒိုင်အိချိ လို့ခေါ်တဲ့အဏုမြူစက်ရုံကြီးရှိတယ်…..သိတဲ့ အတိုင်း ၂၀၁၁အင်အားကြီးတဲ့ ငလျင်ဒဏ်နဲ့ ဆူနာမီလှိုင်းဒဏ်တွေကြောင့်စက်ရုံတစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ကာ ဓာတ်ပေါင်းဖိုတွေ အပူလွန်ကဲပြီး ပေါက်ကွဲတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို ရှေ့တန်းက ရင်ဆ်ိုင်ဖြေရှင်းရသူတွေကတော့ဒိုင်အီချိ စက်ရုံက အလုပ်သမား ပညာရှင်တွေပါပဲ။သူတို့တွေဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ….လူတွေဘယ်လောက်များ သေဘေးကြုံရမလဲ….ဒီကားက ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းပါ….1986 Chernobyl ဖြစ်ရပ်ထက်တောင်အများကြီးဆိုးတယ်လို့ သိရပါတယ်….
အသေအကြေတွေများသလို တကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကပ်ဆိုးကြီးပါ… ဇာတ်လမ်းအစမှအဆုံးထိကို ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းမို့ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…